आफ्नै दाइको बच्चा ! दाइलाई चाहिएयो भने पछि .. पाँचौँ बच्चा, बहिनीले ग’र्भ बोकेर जन्माइ दिईन ! – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on आफ्नै दाइको बच्चा ! दाइलाई चाहिएयो भने पछि .. पाँचौँ बच्चा, बहिनीले ग’र्भ बोकेर जन्माइ दिईन !
आफ्ना दाइको पाँचौं बच्चाको इच्छा पूरा गरिदिन ती युवतीले भाडाको आमा बनेर अर्थात् स–रो—गेसीको माध्यमबाट बच्चा जन्माइदिएकी हुन् ।
← हामीले राम्रो काम गरेर पनि जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौँ : अध्यक्ष प्रचण्ड → काखीमुनिको रौँ का`ट्दै गरेकी युवतीको भिडियो बाहिरियो, किन ?बन्यो भाईरल (भिडियो सहित)